धर्म परिवर्तन गराउनु गलत: उपराष्ट्रपति | Nagarik News - Nepal Republic Media
धर्म परिवर्तन गराउनु गलत: उपराष्ट्रपति
सर्लाही - उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले धर्म परिवर्तन गराउने कार्य गलत भएको बताएका छन्। हरिपुर नगरपालिका–४, हरैयामा मंगलबार अयोजित कृष्ण मन्दिर शिलान्यास समारोहमा उपराष्ट्रपति पुनले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले अरुको धर्मलाई होच्याउने कार्यसमेत गैरकानुनी भएको बताए।
कृष्ण मन्दिर निर्माणका लागि जुटेको यदुवंशी उत्थान समाज नेपालले उपराष्ट्रपति पुनलाई कदरपत्रसहित नागरिक अभिनन्दन गरेको छ। आयोजक पक्षले सयपत्री फूलको माला पहि¥याएर उपराष्ट्रपति पुनलाई सम्मान ग¥यो। पुनले उपराष्ट्रपति भएपछि आफूलाई २ नं. प्रदेशमा पहिलोपटक आउने अवसर दिएकोमा समाजप्रति आभार प्रकट गरे। ‘यदुवंशी उत्थान समाजको निमन्त्रणाकै कारण आज पहिलोपटक २ नं. प्रदेशमा उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाइला टेक्ने अवसर प्राप्त गरेको छु’, उनले भने, ‘त्यसैले आयोजकप्रति आभारी छु।’
कार्यक्रममा २ नं. प्रदेशका प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, पूर्वमन्त्री एवं संघीय सांसद् प्रभु साहलगायतले शुभाकामना मन्तव्य राखेका थिए। मन्दिर निर्माणका लागि स्थानीय ठाकुर राय, विष्णुदेव राय र रामपुकार रायले १८ कट्ठा जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका छन्।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०८:२८ बुधबार
शक्तिपिठ धार्मिक_स्थल नन्दबहादुर_पुन